The Zimbabwe cricket team is forging ahead with performances at the International level. Find out what's happening at all levels of cricket in Zimbabwe with a visit to these selected cricket sites and pages. Zimbabwe is the HOTTEST issue in our cricket discussion forum at the moment, so don’t forget to stop in and have your say. Visit our Forum
MacGill, who at this time is a lone voice from the Aussie team, but likely to be supported by other players with a conscience in coming weeks, is to be commended for his stand, a stand made on moral grounds after much thought and consideration given to the pros and cons of touring Zimbabwe. By Shane Dell 23/04/04
Goodwin Backs Zimbabwe - World Cup - Exclusive
Murray Goodwin has urged the Australians and others to tour strife-torn Zimbabwe despite the continuing political and financial instability which has brought his country-of-birth to its knees. By Ken Piesse 17/01/03
Mugabe Courting Cricket Embargo
As debate rages about a possible World Cup boycott of Zimbabwe, Robert Mugabe, the man who stole Zimbabwe, this week talked about forbidding the English and Australian cricket teams from entering Zimbabwe.
By Justin Lichterman 07/01/03
Join with Justin Lichterman as he tells us why the ICC should boycott playing Cricket World Cup matches in “Mugabeland,” Zimbabwe.
By Justin Lichterman 18/12/02
Calendar of scheduled matches and venues for the Zimbabwe national team.
Detailed profiles and statistics for individual players.
A complete and up-to-date list of current statistics and records for Zimbabwean cricket.
Join with cricket fans from around the world to discuss all the latest in cricket and the issues affecting Zimbabwe.